Tompokolahy sy Tompokovavy. Miomàna hiatrika zava-mitranga tsy toy ireo izay efa hitanao hatramin'izay. Hahita ny ampahany tsara indrindra amin'ny 2017 sy 2018 ianao (novokarinao) - NYE Countdown ho an'ny Djs, Vjs, Nightclubs 2019
SKU: DJ DROP 100 - # 16-2018 Sokajy: DJ Drops
Tompokolahy sy Tompokovavy. Miomàna hiatrika zava-mitranga tsy toy ireo izay efa hitanao hatramin'izay. Hahita ny ampahany tsara indrindra amin'ny 2016 ianao sy 2017 (novokarina)
Toeram-pivarotan-droa roa, Watt 50,000, ary bunch of hotties mamomamo ... Fotoana handosirana ny 2018 amin'ny fomba! (Vokatra)